War-murtiyeed:Jawaab la xidhiidha Faragelinta Qaawan ee ay Xukuumadda Xamar ku hayso heshiishka dhex maray Dawladaha Somaliland iyo Imaaraatka Carabta. |
War-murtiyeed:Jawaab la xidhiidha Faragelinta Qaawan ee ay Xukuumadda Xamar ku hayso heshiishka dhex maray Dawladaha Somaliland iyo Imaaraatka Carabta.
Jamhuuriyadda Somaliland waxay si weyn ula socotaa in Xukuumadda ka talisa Villa Somaliaay si toos ah iyo si dadbanba gacanta ugula jirto arrimo ka dhan ah Nabadda, Wada-jirka, Horumarka, Danaha Dhaqaale iyo kuwa Siyaasadeed ee Qaranka Somaliland. Dawladda iyo Shacabka JSL waxay og yihiin si weyna isha ugu hayaan fadqalalooyinka qorshaysan ee ay Xukuumadda Xamar soo abaabulayso taasoo ay uga dan leedahay in khal-khal lagu geliyo Nabadda, Deganaanshaha, Horumarka iyo Dimuqraadiyadda ka hana-qaaday Somaliland. Sidoo kale, Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay si cad oo aan gabasho lahayn ugu foogan tahay carqaladaynta tallaabo kasta oo uu Qaranka JSL xagga wanaagsan u qaado.